Dambudziko riri kubuda iri misika | Ehupfumi Zvemari
Jose recio | | Bolsa, Zvematongerwo enyika, Zvigadzirwa zvemari
La mamiriro kuburikidza narwo mamwe eanonzi ari kusimukira hupfumi ari kupfuura nawo, anotungamirwa nedambudziko re Turkey neArgentinaIchaenda kuburitsa akateedzana kusahadzika kwehupfumi hwenyika uyezve nehupfumi. Uye zvakare, ichave iyo litmus bvunzo kuratidza kuti misika yequity ichachinja sei mumwedzi iri kuuya. Iko kwaunofanirwa kudzivirirwa pane zvinogona kuitika.
Ehezve, shanduko yenyika dzichiri kusimukira ichave iri yakanakisa thermometer pane marongero auchazoshandisa kushanda mumisika yemari uye kunyanya mumusika wemasheya. Hazvigone kukanganwika kuti mumwedzi ino yezhizha maaramu aenda pakati pevashambadzi vadiki nepakati nekuda kwekuziviswa kweMutungamiriri weUnited States, VaDonald Trump, kuti chinangwa chiri pachena here chekuwedzera aruminiyamu tariffs kubva kune imwe yenyika idzi, senge Turkey. Kusvika padanho rekuti lira yeTurkey yakagadzira kudonha padyo ne10% kutarisana nedhora reUS, kuderera kwegore rose kwe50%
Mukati meichi chiitiko, dzimwe nhau dzinonetsa kwazvo kune hupfumi hwenyika dzakawedzerwa, idzo dziri kuratidzwa mumisika yemari uye vane protagonists vayo ndidzo dzenyika dzinonyanya kukosha dzichiri kusimukira. Semuenzaniso, kuArgentina uko iyo huremu hwadzikira mumutengo wayo nekuda kwekutya kuri pachena pamusoro pekugona chaiko kwekusakwanisa kutora kukura kwechikwereti chayo. Kusvika padanho rekuti misika iri kutotaura nezve kubuda kwe corralito nyowani senge yakaitika pakati pa2001 na2002.
1 Ari kubuda: chimbadzo chakwira
2 Kutengeserana kwenyika
3 Misika yemasheya mu downtrend
4 Chii chakaitika munharaunda yedu?
5 Kuregererwa kwekusimudzira
Ari kubuda: chimbadzo chakwira
Aya mamiriro munyika yeIbero-America pakupedzisira akatungamira iyo yekuArgentina kuburitsa bhangi kuti isarudze kuwedzera chimbadzo, izvo zvakapfuura mumazuva mashoma 45% kusvika 60%. Nezve misika yemari, mhinduro yanga isinganyanyo kunetsekana nezvido zvevashambadziri. Pakave nekudzikisira kweanosvika makumi mashanu muzana yeiyo peso yeArgentina inopesana nedhora. Mupfungwa iyi, imwe yemisika yemari yakanyanya kukanganiswa iSpanish nekuda kwekuratidzwa kwayo kuhupfumi hweArgentina sezvo makambani mazhinji eSpain aripo. Nechikonzero ichi, bhenji yekuyera yemusika weSpanish wemusika wave uri mumwe wevakanyanya kubatwa mugore rino.
Asi kwete chete njodzi dzinouya kubva kuArgentina. Ehezve, ichi chiitiko hachisati chapararira kune dzimwe mari dzenyika dziri kubuda. Semuenzaniso, yeBrazil chaiyo, yerandi yekuSouth Africa, peso yeMexico kana kunyangwe zvakafanana Russian ruble. Chikonzero chikuru chekutsanangura iyi yakasarudzika mamiriro ayo nyika dzichiri kusimukira dziri kupfuura nadziri zvakanyanya nekuda kwenzvimbo yepamusoro yechikwereti chehurumende chinochengetwa nenyika idzi, kunyangwe iri mamiriro ane njodzi akawedzeredzwa nezvimwe zvinhu zvekukosha kwakakosha. Sezvo zviri kunyeverwa kubva kuInternational Monetary Fund (IMF).
Kune rimwe divi, kuiswa kwemitero yakaoma neUnited States kuri kukuvadza zvakanyanya kutengeserana kwepasi rose, sezviri kuratidzwa mumisika yemasheya angangoita pasirese pasirese. Kusvikira kumatanho asingaonekwe mugore rino ayo ave kuda kunyangarika, kunze kweiyo US equities, ayo angangodaro ari nguva dzese-dzakakwira. Kufanotaura kwekukura kwehupfumi pasirese gore rino i4,4%, kunyangwe iri pasi pane iyo 4,7% yakawanikwa gore rapfuura. Dzimwe tsananguro dzekudzikira uku dzakakonzerwa nekuderera kwehupfumi hweChina.
Nekuti zvirokwazvo, iyo hupfumi hweChina Izvo zvinokanganiswawo nemhedzisiro yezviyero zvekudzivirira muUnited States uye mhedzisiro yayo pamisika yepasi rese yemasheya inogona kunge yakaipa kwazvo gore rinotevera. Kunyanya, zvine chekuita nemabhengi uye chikamu chemari mune zvese, izvo zviri izvo zvinonyanya kukanganiswa pane zvese. Sezvawaona mumavhiki apfuura. Mupfungwa iyi, chikamu chaunofanirwa kudzivirira kuburitswa kwazvo pamusika wemari senge zano rekudzivirira nzvimbo dzako mumisika yemari.
Misika yemasheya mu downtrend
Ehezve, imwe yemhedzisiro iyo kusagadzikana kuri kukonzeresa munyika dzichiri kusimukira ndeyokubhururuka kubva kune vashoma nepakati varimi. Hazvishamise kuti nemamiriro ezvinhu aya, kwave kutove nevashambadziri vazhinji avo vafunga kushandura yakakwira mari yemubhadharo inopihwa nemusika wemasheya uye wechikwereti unopihwa nenyika dzichiri kusimukira uye vakatsvaga nzvimbo dzakachengeteka dzemisika yemari. Imwe yadzo parizvino ndiyo New York Stock Exchange, ine index inonyanya kukosha, iyo Dow Jones, iri pazvenhoroondo dzakakwirira uye zvishoma nezvishoma sezvo mwedzi yakapfuura.
Chii chakaitika munharaunda yedu?
Chero zvazvingaitika, vazhinji vevashambadziri vari kutarisa kuti mamiriro ezvinhu aya akavhurika munyika dzichiri kusimukira muEurope uyezve Spain ichaita sei. Huye, indices dzavo dzakatendeuka pakati pegore uye ivo vari kuona sei ayo makuru masheya indices anodonha. Kunyangwe zvisati zvave nesimba renyika dzichiri kusimukira, sezvo zvaive zvine musoro kufanoona nevanoongorora zvemari. Chimwe chinhu chakasiyana zvakanyanya ndechekuti chii chinogona kuitika gore rinouya uye vane tarisiro isiri yakanaka, zvinoenderana nemishumo yakaonekwa mumwedzi yapfuura.
Mune ino kesi, zvikonzero zvekutsanangura maitiro aya zvakasiyana uye zveakasiyana maitiro. Kunyangwe chii chiri kukurudzira iyi nyowani nyowani zvakanyanya zvakare iri yakakwira nhanho yechikwereti icho dzakawanda dzeEuropean hupfumi huinadzo, kunyanya idzo dziri kumaodzanyemba kwekondinendi yekare. Iko kuratidzwa kwemamwe mabhangi eEurope kune hupfumi hweTurkey neArgentina kwakasimba kwazvo. Kunyanya, zvine chekuita neSpanish banking yatove BBVA iyo ine hukama hukuru nenyika yeOttoman. Chinhu chinogona kuyera shanduko yeIbex 35 nekuda kwekutsamira kwayo kubhengi chikamu.
Imwe tsananguro yekumisikidza chiitiko ichi chinoitika mumisika yezvemari iri muchokwadi chekuti nguva yekubviswa kwesimba remari nehurumende yave pedyo. European Central Bank (ECB). Kusvika padanho rekuti danho rakakurukurwa zvakanyanya rinogona kukuvadza mari yemakambani akagadzwa munzvimbo ye euro. Mupfungwa iyi, kuongororwa kwemabhangi kunokanganisa kuti misika yemasheya ingaratidza kurasikirwa kubva muna Ndira, uye mune zvimwe zviitiko pasi pesimba rakasimba. Pachave pasina sarudzo kunze kwekugadzirira chiitiko ichi chitsva chinopihwa neEuropean misika yemasheya uye yeSpanish kunyanya.
Ehezve, kana Spain kana misika yayo yezvemari haisi kuzobvisa iyi mamiriro epasi rese uye humbowo hweizvi ndiko kuderera kwehuwandu hwenyika kubva muna Kubvumbi. Kunyangwe zvinhu zvinogona kuwedzera, mumaonero evamwe vanoongorora zvemari zvakanyanya. Zano rakanakisa revashambadziri nderekuva mune chinzvimbo chemvura kune izvo zvinogona kuitika mune inotevera. Zvakare senge zano rekushandisa mukana wemabhizinesi ayo pasina mubvunzo achamuka kubva zvino zvichienda mberi. Nemitengo yemasheya inogona kukwikwidza zvakanyanya kupfuura nakare.
Zviripachena kuti mwero wakakwira wechikwereti mune zvese zviri kusimukira uye nyika dzakasimukira zvinogona kuwedzera mamiriro acho mumwedzi iri kuuya kana kunyange makore. Kuti udzivise iyi isingafadzi mamiriro, hazvingakuvadze kushandisa mamwe marongero echiito anozove nechinangwa chikuru chekuchengetedza yako mari pane mamwe maratidziro ehunyanzvi. Kufanana neinotevera iyo yatiri kuzokufumura pazasi:
Haisi nguva yakanakisa yekudyara mumusika wemasheya. Unogona kutsvaga zvimwe dzimwe nzira dzinobatsira, senge mbishi zvigadzirwa kana simbi yakakosha.
Inguva yeku kukupa zororo uye cherekedza mashandisiro anoita mabhegi pamberi pezvinetso zvambotaurwa.
Zviri nani kuwana Seguridad Muzvigadzirwa zvemari, iwe unofanirwa kutsvaga purofiti yakakwira kwazvo iyo pakupedzisira ivo havazokwanisa kukupa iwe.
Yakagadziriswa mari ichaita simudza kufarira kwako Uye inogona kunge iri nguva yakanaka yekumutsiridza rudzi urwu rwekudyara iwe yawakakanganwa kwenguva refu.
Usakanganwa kuti iwe unogona zvakare kugadzira yako mari inobatsira ne bhegi pasi. Kubudikidza nezvakatenderedzwa zvigadzirwa izvo izvozvi zvinogona kuve mukana wakanakisa wekuwana yakakwira capital capital. Kunyange hazvo njodzi dzakakwirira.
Iwe unenge usina sarudzo asi kusiyanisa matanho ekudyara, uko temu yakamisirwa yemiti zvigadzirwa inofanirwa kuve nenzvimbo mune yako inotevera yekudyara portfolio. Kwete pasina, iwe uchave uine yakagadziriswa uye yakavimbiswa mari gore rega, kunyangwe isiri yakanyanya kukwirira. Asi ichi chirevo chisingafanirwe kushomeka munguva dzekusagadzikana kukuru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Dambudziko riri kubuda rinoita misika
Matipi manomwe ekubudirira mumusika wemasheya uye kutarisana nekushomeka kwemari